Cumin | November 2019
Miyuu qumman yahay oo dhadhamiyaa?
Waa maxay macdanta waxtarka leh: sifooyinka, cuntada, cuntooyinka
Qumaan ma aha xawaashka ugu badan ee dalkeenna, laakiin qof kastaa wuu ogyahay dhadhanka tufaaxan. In lagu kariyo, kaliya miraha geedka this loo isticmaalo. Maantana waxaan eegnaa dumin, sifooyinka dawooyinka iyo ka hortaga. Waxyaabaha ka kooban caraway iyo qiimaha nafaqada Warshadaan badan oo vitamiin ah. Abuurka qumman waxaa ku jira wax badan oo bir ah, fosyo iyo kalsiyum.
Waxaa jira dhir la mid ah kan kale sida laba dhibcood oo biyo ah. Si aanad u jahwareersanayn, waa inaad si fiican u barataa sida ay u egyihiin iyo sida ay u kala duwan yihiin. Labadani aan caadi ahayn waxaa ka mid ah laba dhir oo caadi ah - dill iyo cumin. Tilmaanta iyo sifooyinka dhirta Inkastoo dhammaan isku midka dhirta, si loo kala saaro waa mid sahlan.
Qodobka ugu horreeya ee sifooyinka wanaagsan ee saliidda madow ee madow ayaa muuqday dhawr kun oo sano ka hor, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Dhakhaatiir badan iyo cilmi baarayaal (Hippocrates, Avicenna, Dioscorides) ayaa ka hadlay sheekadooda. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo isticmaalo saliidda, wuxuu soo bandhigi doonaa sifooyinka isticmaalka sheygan ee qaababka qurxinta ee loogu talagalay daryeelka maqaarka iyo ka takhalusidda cilladaha qurxinta.
Cumin - warshad gaar ah, oo loo yaqaan 'spice', ayaa loo isticmaalo ma aha oo kaliya jihada culeyska, laakiin sidoo kale waa wakiilka daweynta xanuunka caloosha. Ku saabsan waxtarka faa'iido leh ee ku saabsan jirka iyo xeerarka codsiga ayaa looga doodi doonaa hoos. Qeexitaanka Botanical ee geedka Cumin waa xubin bangi ah ama xubin muddo dheer ah oo ka tirsan qoyska dalladda.
Sida loo isticmaalo faa'iidooyinka madow madow ee miisaanka lumay
Cumin waa daawo caan ah oo loo adeegsado karinta. Si kastaba ha ahaatee, cid kastaa way ogyihiin in ay sabab u tahay kiimikada kiimikada gaarka ah, miraha iyo saliidda laga helo dhirta waxay yeelan kartaa tiro saameyn wax ku ool ah ku leh jirka bini'aadamka, oo ay ka mid tahay dhiirigelinta miisaanka luminta. Sidee dhabta ah u saameyn karaan miisaanka lumista - aqri maqaalkan.
Guryaha dawooyinka iyo maadooyinka loo isticmaalo isticmaalka abuurka cumin
Qumlada abuurka qurxinta alaabta wax lagu dubo, waxaa loo isticmaalaa sida hilibka lo'da iyo hilibka kalluunka.Qumayntu waxay siinaysaa dhadhan, dhadhan, dhadhan ah. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaalaa daawooyinka kale ee daawooyinka kale waxaana loo aqoonsadaa dawo rasmi ah oo laga helo dawooyinka rasmiga ah ee Kanada, Isbaanishka, Awstaria iyo wadamada kale.
Guryaha dawooyinka ee madow ee madow leh malab
Caadada madow waxaa loogu talagalay ujeeddooyinka nafaqada, oo u adeega sidii loo iibin lahaa, lakiin hoos uma dhigeyso sifooyinka bogsashada dhirta, gaar ahaan walxaha kale ee faa'iido leh. Waxaa ka mid ah noocyada ugu caansan ee abuurka ama saliida madow ee madow waa malab, taas oo lafteedu kaliya waa kaydka maaddooyinka waxtarka leh.
Noocyada isticmaalka saliidda madow ee madow leh fangor-jiidka
Waxaa jira 30 nooc oo kala ah khudradda gaarka ah ee adduunka, 10 ka mid ah waxaa laga heli karaa Russia. Wadankayaga, cumin waxaa sidoo kale loo yaqaannaa mashiinka madow, galleyda ama Kalindzhi. Codso ma aha oo kaliya qaabka abuurka ah ee suxuunta kala duwan, laakiin sidoo kale samee saliid, taas oo ah qiimaha nafleyda qiimo leh oo ka caawin kara in laga guuleysto cuduro badan.
Cumro madow - warshad aad u faa'iido leh oo hodan ah dhammaan noocyada fitamiinada, macdanta iyo xayawaanka kale ee firfircoon. Saliida laga bilaabo abuurkeeda waxay hagaajin kartaa caafimaadka ragga. Qodobkan waxaan tixgelineynaa faa'iidooyinka muhiimka ah iyo waxyeelada suurto galka ah ee macdanta madow ee ku jirta prostate iyo dhibaatooyinka kale ee ragga ah.
Isticmaal dumin si loo kordhiyo nuujinta inta lagu jiro naas nuujinta
Daawooyinka kale, qamriga ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah habka ugu waxtarka leh ee lagu kordhiyo nuujinta inta lagu jiro naas nuujinta. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida loo diyaariyo oo loo qaato walxaha cayriin ee loogu talagalay hooyooyinka da'da yar, iyo sidoo kale sida uu u dhaqmayo isaga daawo rasmi ah. Qeexida iyo walxaha kiimikada ee abuurka caraway Cumin - basbaas asal ahaan ka soo Eurasia.
Noocyada isticmaalka suuxinta madow inta lagu jiro uurka
Dumarka sugaya dhalashada cunugooda waxay aad u taxaddaraan caafimaadkooda iyo xulashadooda doorashadooda. Gaar ahaan, waxaa lagugula talinayaa in aad barato sida loo isticmaalo lafaha caanaha sida madow madow inta lagu guda jiro uurka, iyo waa maxay tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
Sida loo kordhiyo macaan ee dabacasaha iyo sida loo quudiyo taas?
Kala duwanaanshaha canabka ah ee gobollada waqooyiga - "Xusuusta Dombkovskaya"
Oktoobar 1, sida ku cad taariikhda qaranka, Arina - Shipnows Day ayaa loo dabaaldegaa. Waa waqtigaan wuxuu bilaabmaa ururinta iyo goosashada ee miskaha xilliga jiilaalka. Dabcan, aag juqraafi kasta, xiliga aruurinta ma aha mid had iyo jeer ku haboon taariikhaha taariikhda kalandarka. Waa maxay xaqiiqda? Saxarka ee midhaha geedka this waa qaybta ugu qiimaha badan. Read More
Noocyada daryeelka ee saxafka guriga
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "jecel Mamenkin"